Fabian Delph Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha La Xiriira
Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Fabian Delph Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha La Xiriira
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full Story ee Genius kaas oo si fiican u yaqaan magaca; "Fabs". Dabeecadeena Fabian Delph Carruurta iyo faahfaahinta Xogta Aan Bixin Karin waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta caan ka ah, asalka qoyska, nolosha xiriirka, iyo xaqiiqooyin kale oo caddayn ah oo caddaynaya (wax yar).
Sheekada nooca Fabian Delph Childhood waa mid xiiso leh, haddii aan caadi ahayn - waa sheeko ku saabsan wiil yar oo hooseeya oo ka yimid asal adag oo qoys. Inkastoo uu ka tagay aabihiis, Delph ayaa ku baraarujiyay tayada kubada cagta ee aan caadiga ahayn. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Fabian Delph Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Hore
Fabian Delph ayaa ku dhashay Maalinta 21st ee Noofembar 1989 hooyadiis, Donna Delph iyo aabbaha aan la garanayn ee Bradford, Boqortooyada Ingiriiska. Fabian Delph's waalidiintiisii ​​way kala qaybsadeen markii uu ilmo ahaa.
Sida uu mar hore u sheegay saxaafadda, Poor Fabian ayaa aabbaha ka tagay markii uu ilmo ahaa.
Hore ee noloshiisa caruurnimada, aabaha Fabian ayaa lagu eedeeyay in uu ka baxsaday markii uu aad u yaryahay inuu xasuusto. Taasi waxay ka dhigtay Fabian, hooyadiis iyo walaalaheed waxay u guuraan dhul dhaxal ah oo ku yaal duleedka magaalada Bradford.
Saamaynta Delph's Parental Breakup: Qof kasta oo ku noolaa fasaxa waalidku wuxuu ogaan doonaa oo kaliya si aad u fiicnaan karta xanuunka qoto dheer ee uu keeni karo. Tani, shaki la'aan, waxa ay waxyeelo nafsi ah u geysteen Fabian iyo walaalihiis. Saameyntu waxay si cad u caddaynaysaa in la dhiso shaqadiisa.
Fabian Delph Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Doorka hooyada
Fabian hooyadii, Donna Delph waa kii ka caawiyey wiilkiisa mustaqbalkiisa hore. Fabian, waxaa qasaaro aheyd dhamaadkii kubada cagta ee kubada cagta.
Fabian hooyadii Donna waxay u qalantaa deyn aad u badan iyada oo u keentay inuu hubiyo inuu ka soo baxo saameyn xun oo bulshadeed. Waqtigaas, Fabian Delph's Family wuxuu ku noolaa qayb adag oo ka mid ah Bradford halkaas oo dadku ay khasaari karaan saamaynta xun ee ay helayaan.
Koraaya, Fabian waxa uu uqaaday go'aan adag oo ah in uu kubada cagta uu riyoodo islamarkaana uu rajeynayo inuu noqdo ciyaaryahan xirfadle ah ma ahan kaliya arintaas. Sida wiil yar, mid ka mid ah riyadii ugu weynayd ee Fabian waa inuu iibsado hooyadiis markii uu taajir noqdo.
Fabian Delph Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Laga soo bilaabo Grass ilaa Grace
Fabian Delph hooyadii waxay ahayd mid liidata mana awoodi karayso akadeemiyadda iyo kor u qaadida wiilkeeda iyo qoyska. Waxay ahayd nadiif ah oo kasbatay pennies (£ 278 labadii asbuuc) taas oo aan meelna tagi karin.
Nasiib daro, Donna Delph ayaa aad ugu rajo weynaaday wiilkiisa guusha waxayna ku qasbey in uu khayaano ku sameeyo goobteeda shaqada. Waxay xayirtay £ 45,052 iyaga oo ka fakaraya in ay halis u tahay qaadashada. Nasiib darro, waxay dib u dhacday oo Donna la qabtay. Hooyo-saddex-jir ayaa la siiyay xukun xabsi ah 12-bishii. Waa arrin ku habboon in marka la ogaado hooyada hal hooyo Donna ay geysatay khayaanaheeda, waxay horeyba ugu jirtey tijaabin dambi la mid ah. Waxay ku dhammaatay maxkamadda Bradford Crown June bishii 2007.
Ka dib markii la sii daayay, Donna dib ayuu ugu shaqeeyay sidii nadiifiye. Later, go'aanka mustaqbalka ee mustaqbalka Fabian Delph ayaa ugu dambeyntii horseeday guul. Fabian Delph asalkiisu wuxuu bilaabay inuu noqdo mid cusub, kubada cagta ayaa bilaabay inay bixiso. Fabian wuxuu ugu dambeyntii dib ugu soo celiyay rumaysadkiisii ​​hooyadiis markii uu iibsaday gurigiisa si uu u guto riyadiisa hore.
Fabian Delph Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Xiriirka
Shaki la'aan, Kubadda cagta waa geed dahabi ah, meel Fabian Delph ka heshay xaqiiqda ah ee dhibaatada ka dhalatay burburka waalidka. Waxa uu sidoo kale helay helitaanka daqiiqadii uu la kulmay jacaylkiisa noloshiisa, Natalie ee 2013.
Natalie wuxuu ku dhashay Maine 31, 1990 (sanad ka yar da 'yar Fabian), Manchester City, England. Waxay tahay ganacsade ganacsi ah, ganacsade iyo maalgashi aad uwanaagsan. Xiriirkoodu wuxuu ka kordhay xaalada saaxiibtinimo ee ugu wanaagsan jacaylka dhabta ah ee keenay guurka. Waa muhiim inaad ogeysiiso in labada jacaylka ay isku raaceen in ay is guursadaan xaflad gaar ah isla sanadkaas ay kulmeen.
Fabian maanta waa nin guursaday guursaday. Laba sanno ka dib guurkooda, lamaanayaashu waxay soo dhaweeyeen ilmahooda kowaad, wiil. Fabian waxaa caan ku ah taageerayaasha sida aabe daryeelaya.
Ka dib dhalashada wiilkoodu wuxuu ku xigay dhalashada gabadhiisa Aleya ee 2015. Natalie waxay u dhalatay ilmaheedii saddexaad ee 30th ee Juun, 2018 laba maalmood ka dib markii ay ciyaartii finalka ee koobka adduunka ee 2018 ku dhexmartay Belgium ee Kaliningrad. Taas ayaa Fabian u duulay England isagoo ka yimid Russia intii lagu jiray Koobka Adduunka si uu u arko dhalashada cunugiisa. Waxa uu dib ugu soo laabtay Ruushka ka dib guusha uu gaadhay.
Fabian Delph Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Xaqiiqooyinka Nolosha Nolosha
On 23 Diisembar 2008, Delph waxaa lagu xiray dambi.
Waxaa lagu soo oogay dacwad khamri cabin in Rothwell, Leeds, halka uu si aan kala sooc lahayn gurigiisa ula socday afar saaxiibadiis. Delph wuxuu dareemay murugo dambi. Wuxuu qirtay dembiga Maxkamadda Magistrate-ka ee Leeds si uu u xakumo xadka xawaaraha. Ugu dambeyntii waxaa la ganaaxay £ 1,400 waxaana sii dheereynaya waditaanka baabuurta ee 18 bilood.
Fabian Delph waa asal ahaan waa Guyanese. Tani waxay la mid tahay tan Ruben Loftus-Cheek.
Dabcan, Fabian Delph waa aabbe aad uwanaagsan oo yaqaan farsamooyinka caruurtiisa ku faraxsan. Hoos waxaa ku qoran sawirka aabaha sharafta leh gabadhiisa Aleya.
Fabian Delph Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Natiijada Dhalinyarada
Delph ayaa xirfadiisa ciyaareed ku bilaabay kubada cagta isagoo ah da'yar ku sugan Bradford City. Delph ayaa ka tagay City bishii September 2001 si uu ugu biiro kooxda Leeds United ka dib markii lagu soo jeediyay macalinkooda akadeemigga ee saameyn weyn ku yeeshay taageerada Delph qoyska.
Isagoo koraya, Fabian wuxuu tagay Dugsiga Tong Second, oo uu ka tagay 2006. Sannad ka dib, waxaa jiray dhibaatooyin dhaqaale oo ku saabsan qoyska Delph ee ku saabsan dhaqaalaha si uu u sii wato waxbarashadiisa iyo mustaqbalkiisa ciyaaraha kubadda cagta ee Leeds United Academy. Tani waxay ahayd wakhti hooyadiis oo keli ah u orday fool-maroodiga khiyaanada.
Lucy Delph, si kastaba ha ahaatee, waxay tagtay Leeds United Academy ee deeq waxbarasho. Wuxuu isku dhufsaday kubada cagta iyo waxbarashadiisa ku mahadnaqay deeqda waxbarasho ee Leeds. Marka da'da 16 Delph uu dhamaystirtay waxbarashadiisa dugsiga lamaanaha ah ee Leeds, Boston Spa School.
Ka dib markii ay kor u kacday akadeemiyada akadeemiyada dhalinyarada, Delph waxaa la siiyay qandaraaskiisii ​​ugu horeeyay ee ku saabsanaa 11 January 2008. Ilaa March March 2009, qaab ciyaareedkiisa intii lagu jiray 2008-09 xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay wuxuu Delph u sharaxay ciyaaryahanka ugu fiican sannadka. Aston Villa ayaa raadineysa adeegiisa. Sanadihii hore 6, wuxuu ogaaday in uu u ciyaaro Manchester City. Nasashada, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantihiin akhrinta nooca Fabian Delph Childhood Story iyo xaqiiqooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Callum Wilson Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Gary Cahill Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta